Ikhaya STARS E-EUROPE UHarry Winks Ingane Yendaba Indaba Plus Untold Biography Facts
I-LB ibonisa iNdaba Egcwele ye-Football Genius eyaziwa kakhulu ngesiteketiso "I-Little Iniesta". I-Harry Winks Childhood Story kanye ne-Untold Biography Facts ikulethela i-akhawunti egcwele yezenzakalo eziphawulekayo kusukela ngesikhathi sokuzalwa kuze kube manje. Ukuhlaziywa kuhilela ukuphila kwakhe kwasekuqaleni, imvelaphi yomndeni, indaba yokuphila ngaphambi kokudumo, ukuphakama kwendaba yegama, ubuhlobo nokuphila komuntu siqu.
Yebo, wonke umuntu uyazi ngokubukeka kwakhe okuhle, ifreyimu encane nesitayela sokudlala. Kodwa-ke, bambalwa kuphela abheka uHarry Winks 'Biography okuthakazelisayo kakhulu. Manje ngaphandle kokuqhubeka kwe-ado, ake siqale.
UHarry Winks Ingane Yenkulumo Plus Untold Biography Facts-Ukuphila Kwangaphambilini Nomndeni
Ukuqala, igama lakhe eliphelele nguHarry Billy Winks. UHarry Winks njengoba eyazi ukuthi wazalwa ngosuku lwe-2nd kaFebhuwari U-1996 kunina, u-Anita Winks nobaba, uGary Winks eHemel Hempstead, e-United Kingdom.
UHarry wazalelwa emndenini onothando webhola lebhola. Ubaba wakhe uGary wayengumdlali webhola lezemidlalo odlala phambili odlala uHemel noBerkhamsted. Umndeni wakwaWinks ubelokhu umsekeli we-Spurs wesikhathi eside kusukela ngo-1984 ngemuva kokuphumelela kweNdebe ye-Spurs UEFA.
Ekhuluma ngemlando yomndeni noma imvelaphi, uHarry Winks uvela emndenini wesizwe saseSpain ngokusebenzisa unina nogogo nomkhulu. Kodwa uziqhenya ngokuba ngumBrithani ngoyise. UHarry wakhulela nodadewabo omncane ogama lakhe linguMilli owamvikela kakhulu.
Kungakhathaliseki ukuthi uhlala ekhaya noma uboshwe nabazala bakhe, uHarry okufanekisiwe ngezansi wayezohlale ebuka udadewabo omncane omnandi.
Namuhla, kuhle kakhulu futhi uziqhenya kakhulu ngo-Milli ukubona umfowabo omkhulu, umuntu oseduze kakhulu nomlingani wangaphambili olwabugebengu othola impumelelo enkulu yebhola lezinyawo.
Njengamanje ngesikhathi sokubhala, akekho emhlabeni onesibopho esiqinile esabelana phakathi kukaHarry, Milli nomama wabo u-Anita.
UHarry Winks Ingane Yenkulumo Plus Untold Biography Facts- Umsebenzi we-Buildup
Ekhuluma ngokuba ngumdlali we-Spurs, ubaba ka-Harry uGary wake wathi:
Yiqiniso uHarry ungumdlali we-Spurs, owaphoqelelwa nguye!
UHarry nje njengomama wakhe nobaba babekade be Tottenham Hotspur fan ngaphambi kokuba aqale ukudlala ibhola. UHarry waya emdlalweni wokuqala wokukhumbuleka eWhite Hart Lane lapho eneminyaka eyisithupha ubudala. Ukubona okuthandwa ngu UMichael Carrick, Robbie Keane futhi Teddy Sheringham wamkhuthaza ukuba aqale ukukhahlela noma yini ebonakala ibhola lebhola.
Ekhuluma ngokuhlangenwe nakho kwebhola lendodana yakhe esemncane, umama kaHarry Wink sika-Anita utshele iGazethi:
"Ngisho njengengane encane uHarry ayodlala nge-sock eyigcwele. Uzobe eseyidonsa yonke indawo ngaso sonke isikhathi. Khona-ke wathuthela ibhola le-tennis. Uzohlala ewukhahlela nxazonke endlini, ungishaye! "
Uma kungabheki ibhola lebhola nxazonke noma ngaphakathi kwendlu yakubo, uHarry wayezobonakala ebuza eduze eduze nama-posters David Beckham futhi Michael Owen.
Naphezu kokuthandana kukaHarry ngeSpurs, wanquma ukuzibopha ngezingubo zase-England nezicathulo. Uma ubheka izithombe zakhe ezingenhla, uzobona ukuthi yizinto zakhe ezithandayo zejezi.
Njengesikhathi sokubhala, i-Jersey National Jersey igijima kahle kakhulu.
UHarry Winks Ingane Yenkulumo Plus Untold Biography Facts- Ukuqala Kokuqala Kwomsebenzi
Ikhono likaHarry laqala ukutholakala eneminyaka engu-5 lapho abazali bakhe bebhalisa ohlwini lwezinkundla ze-Soccer Camps. Wabuye waqala ukudlala no-Echoes FC eHemel Hempstead lapho amathalenta akhe emvelo awaziwa kahle.
UHarry wayaziwa njengomuntu onamandla futhi naphezu kwesigxobo sakhe esincane, wayezobe esesifinyelela kahle ngezinga elihle. Ngasekuqaleni, uHarry wayenemfundo yakhe yasekuqaleni yebhola neCavendish School ehloniphekile lapho ephothula khona iminyaka engu-11.
UHarry Winks Ingane Yenkulumo Plus Untold Biography Facts- Ukuqala Kwangaphambili E-Spurs
Ngenxa yokukwazi ukuphatha ibhola njengengane, uHarry wanconywa ngumfundisi wakhe eRoss & Andy's Soccer Camps ukuyohlola imizamo yeTottenham Hotspurs. Wadlula futhi wabhalisa eklabhu. Ngisho naseTittenham academy, amaqembu amaningi aqhubeka emncintisana njengomntwana.
Abazali bakaHarry u-Anita noGary babezimisele ukucindezela imihlatshelo eminingi uHarry ayeyenzile ezinsukwini zakhe zakuqala eTottenham. Okokuqala, njengomfana osemncane, ama-Winks ahlushwa ukulimala okukhulayo nezinkinga zangemva. Naphezu kwalokhu, isikhulu sezemfundo uMcDermott sinokholo kumfana omncane njengoba nje enza nabalimi abancane, njengokuthi Kane futhi Andros Townsend. Ngisho Teddy Sheringham wathatha isithakazelo esithakazelisayo kuma-Winks amancane futhi Scott Parker kwavela njengomeluleki.
UHarry Winks Ingane Yenkulumo Plus Untold Biography Facts- Isinqumo Esikhulu Nokuphakama Kwegama
ukuze anikezele ukuphila kwakhe emaphupheni akhe, uHarry wanquma ukuphuma ekhaya ekhaya eneminyaka engu-16 ukuze ahlale eduze nohlelo lwe-Spurs lokuqeqesha. Lesi sinqumo sasingelula kumndeni wakwaWinks. Ngokomama wakhe u-Anita;
UHarry kwadingeka ashintshe, engqondweni. Wayenomusa kakhulu, futhi ukuhamba ngaleyo minyaka kwakunzima kakhulu. Sonke thina-mina, Gary, noMilli simile futhi sakhala njengoba evala umnyango wangaphambili phambi kwethu.
Abazali bakaHarry babezombona nje kuphela kusihlwa ngesonto. Ngokusho kukaHarry, ukusuka emndenini ukuhlala nabantu ababengakaze bahlangane mhlawumbe kwakunzima kunabo bonke ayekwenzile empilweni yakhe yonke. UHarry waqhubeka ehlala eSouthgate, indawo yasemadolobheni enyakatho yeLondon. Wahlala nombhangqwana omuhle oshadile ogama lakhe linguLesley noMat. Ngenhlanhla, uMat owayengumqeqeshi wokushayela wafundisa uHarry ukuthi angashayela kanjani.
UHarry Winks Ingane Yenkulumo Plus Untold Biography Facts- Ukuphakama Ekudumeni
Ukuzimisela kukaHarry ukuba uchwepheshe akuzange kuhambe njengenganekwane edlula. Ngo-27 July 2014, wasayina isivumelwano sakhe sokuqala ne-Tottenham ngemuva kokumangaza Mauricio Pochettino owabukela ngokweqile amavidiyo womculo wakhe.
I-Pochettino wabona uHarry njengomdlali ofana nabafowabo baseSpain Xavi futhi I-Iniesta. Uphinde wambheka ukuthi uhluke ngokuphelele kubantu abaphakathi kwakhe okungukuthi; UVictor Wanyama, U-Eric Dier, UMusa Dembélé futhi UMoussa Sissoko. Umkhosi wokuqala wegagasi likaHarry wabonisa ukuthi yena no Mauricio Pochettino basebenzile isibopho esiqinile kusukela ekuhlanganisweni kwabo kokuqala.
Ngokumangalisa, uHarry wabizelwa eNgilandi naphezu kokuqala kokuqala kokuqala kweqembu likaSpurs. Gareth Southgate wamthatha wambonga ngenxa yokudlula kwakhe.
UHarry Winks Ingane Yenkulumo Plus Untold Biography Facts- Ukuphila Ubudlelwano
Uthi bewazi?… Kuwo wonke ama-movie we-teen, le ntombazane yayizobhekana nezikhathi eziningi ze-footballer ethandwayo. Ngesinye isikhathi empilweni yaleyo ntombazane, ejulile, kuhlale kunesifiso sokuqamba isidlali senkanyezi. Ngeshwa, ama-movie angasibonisi ukuhlukunyezwa kokuthandana nomdlali webhola. Lesi yisinye sezizathu zokuthi kungani uHarry engashadile phakathi neminyaka yokuqala yemisebenzi yakhe.
Indaba yobuhlobo bokuqala kaHarry yafika eneminyaka engu-22 (July 2018) ngesikhathi ebonwa ngunkosikazi waseBrithani owonakele, uRosie Williams oneminyaka engu-4 engumdala wakhe. Lo mbhangqwana wabonwa ngokushiya ihhotela le-5-star, ehhotela laseLondon Shangri-La.
Kulesi sithombe, uHarry wabonakala engumfana ophelele kaRosie ngoba wayemvulele umnyango. Lesi yisikhathi uRosie esanda kukhishwa esibhedlela saseBritain Love Island. Ukuphuma e-blazer e-stylish yellow, owesifazane waseWalld kwadingeka agqoke isibonakaliso esihle kakhulu kumuntu owamdumisa. Isikhathi kuphela sizokutshela ukuthi uHarry uyomthatha njengentombi noma umfazi.
UHarry Winks Ingane Yenkulumo Plus Untold Biography Facts- Ukuphila Personal
UHarry wazalwa enamahloni futhi enokuthula, kodwa ngakolunye uhlangothi, angaba yinkimbinkimbi futhi enamandla. Njengoba kubonwe kusukela ezinsukwini zakhe ezisencane, Ungumuntu ongakwazi ukuzivumelanisa kalula nokushintsha kwemvelo noma amandla amasha azungezile.
Uthi bewazi?… Ngokungafani nabanye abadlali bebhola, uHarry Winks akasondelene kakhulu nabalandeli. Lokhu kungenxa yokuthi wayesekhokhwa ngokubi ngokwenza okuhle. Manje ake ngitshele okwenzekile ngempela!
UHarry ubelokhu ebonwa eqenjini eliseWatford ngombani, owamncenga kakhulu umdlali ngesithombe nge-Winks engazi ukuthi isisusa siphila. Ngokumangazayo, lo fan ofanayo ogama lakhe linguNikhil Shah uthumele isithombe ekhasini lakhe lokuxhumana nabantu eveza ama-Winks ekwenzeni i-clubbing naphezu kokuhlengikaza ukulimala.
Umculi naye wahamba waze wazama ukungena naye The Sun ukuxoxa ukudayiswa kwesithombe okungenzeka sasihamba. Ngezansi isifingqo salokho okubukeka okulula kodwa okungalungile Nikhil Shah wabhala emva kokulayisha isithombe ku-akhawunti yakhe ye-Instagram.
Lokhu kuchaza ukuthi kungani ama-Winks engabanjwanga kakhulu nabalandeli ikakhulukazi ezindaweni ezingalungile. Naphezu komzamo wokuthola ukuthandwa okuncane, u-Shah wabhidliza abalandeli ngokuzama ukuphuma kuma-Winks.
I-CoD Fan: UHarry uzibheka njengomlutha wegeyimu ye-Call of Duty.
UHarry naphezu kwamashejuli akhe omatasa webhola lezinyawo usathola isikhathi sokuya e-Call Of Duty imicimbi.
UHarry akayena umlutha njengoba Hector Bellerin ngubani owake wadlala i-CoD ngamahora angu-30 ngesonto.
QAPHELA QAPHELA: Siyabonga ngokufunda i-Harry Winks Childhood Story yethu kanye ne-Untold Biography Facts. Kuzo LifeBogger, silwela ukunemba nokulingana. Uma uthola into engabonakali kahle, sicela wabelane nathi ngokuphawula ngezansi. Sizohlala sibazisa futhi sihlonipha imibono yakho.
Gary Cahill Childhood Indaba Plus Untold Biography Amaqiniso